Ndingazifumanaphi iipensile zezilwanyana zokusika iphepha nabantwana? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ndingazifumanaphi iipensile zezilwanyana zokusika iphepha nabantwana?
Isinyithi kunye nezilwanyana zihlala ziluncedo xa zizoba nabantwana. Uyabona, ayizizo zonke kuthi esinokuzoba, kwaye xa kukho istayile ngesandla, le ngxaki isonjululwe ngoko nangoko. Ngoku ndiza kukubonelela ngeentlobo ezininzi zezilwanyana onokuthi uzikhuphele apha kwaye ubandakanyeke ekuzobeni, ukusika kunye nombala wabantwana.
Ezi stencils zinokukhangelwa kule ndawo, nantsi umzekelo wento embalwa onokuyithatha uyiprinte, emva koko uyinqumle.
Isipikili sekiti emnandi.
Sakhe sacelwa ukuba sizise iipensile zezilwanyana kwigumbi lengwane ukuze abantwana bazobe kwaye bafake imibala eklasini yabo. Ngelishwa, babengekabikho ezivenkileni kwaye kwafuneka basebenzise i-Intanethi. Kwakungasasazeke kangako ngelo xesha, kodwa emsebenzini bekukhuseleka kwaye kuprintwe ulwazi oluyimfuneko. Ngoku akukho ngxaki ngoku. Kwenye yezi sayithi zininzi ndizifumene izinto ozifunayo. Kukho iipensile zezilwanyana ezingama-52 (zentsomi nezokwenyani). Kufuneka ucofe nje kuyo iqhosha lasekhohlo, kwaye ucofe ekunene ukugcina, ukukhuphela, ukuprinta kunye nokusika itemplate. Landela ikhonkco.
Akunyanzelekanga ukuba ube nakho ukuzoba, kuba ungasebenzisa iipensile ezenziwe ngeetemplate okanye iitemplate ezenziwe ngeendlela ezahlukeneyo zobugcisa kunye nokuhanjiswa. Kuyinto elula kakhulu kwaye ilula, yonga ixesha.
Ithemplethi kufuneka iprintwe, iguqulwe / ijikelezwe ephepheni kunye / okanye isikwe.
Apha unokukhuphela iikopi ezingama-20 zezilwanyana ezahlukeneyo kunye neentaka. (simahla).
Abantwana bawuthanda kakhulu umsebenzi wokudala nabazali babo, kwaye ezi stencils ziya kunceda kufundo lwezilwanyana, khumbula indlela ezahlukileyo izilwanyana ezibonakala ngayo, izinto ezibizwa ngayo.
Ukongeza, uya kufundisa umntwana wakho ukuba asebenze ngepensile, isikhafu, ipeyinti.
Iingcamango ezininzi zinokufumaneka kwiwebhusayithi yethu. & quot; Umbuzo omkhulu;
Ubugcisa obuvela kwekhadibhodi kunye nephepha.
Apho unokukhuphela khona iifoto.
Njani kwaye kungenziwa ntoni ephepheni.
Stencils zinokukusebenzela hayi ngokuzoba kuphela, zinokusetyenziselwa ukusika izilwanyana ekubeni ziziva, zivakalelwa, zenze izicelo kwiphepha elinemibala.
Khuphela istayile kwikhompyuter yakho kwaye uyiprinte kwiprinta. Yonke imifanekiso yezilwanyana ilula kakhulu kwaye ukuba akukho printa, unokuzama ukuzoba imifanekiso enjalo.
Wonke umntu uyazi ukuba angenza njani iphepha, kuba ufuna iphepha elinemibala emininzi, ipensile, isikere, iglu. Kwaye indlela yokwenza isicelo sokuziva, ungabona udidi oluphezulu kwisiza esithi; intombazana ezintathu;
Ukuphuhliswa kwezakhono zeemoto ezifanelekileyo zezandla kunye nophuhliso lweengcinga zokuyila nokucinga ebantwaneni, kuluncedo kakhulu ukusika isikhafu ephepheni. Ukuthenga itemplates ezenziwe ngomatshini zokusika zibize kakhulu, ke ndicebisa ukuba ndikhuphele iifom ezenziwe ngomatshini kwi-Intanethi kwaye ndiyeke abantwana bazinqumle. Ungafumana uninzi lweepensile kule ndawo, apha nalapha, kunye nokukhethwa okuninzi endiya kukunika apha:
Ukukhetha abantwana abadala apha:
Ukuzoba kunceda ukunciphisa uxinzelelo, kwaye abantwana bafunda ukuziva imibala kunye nokufunda malunga nehlabathi.
Umbala ohlekisayo okanye iipensile zezilwanyana kunye neentaka zokufaka imibala zinokukhutshelwa kwiwebhusayithi yeBV. Sika kunye nombala kumacala omabini. Yongeza ngesicelo kwaye ufumane ubuciko bobuchwephesha.
Ndiyazithanda iistensile ezinamacandelo aliqela, zinokuprintwa ephepheni, emva koko zisikwe kwaye zibethelelwe njengasemfanekisweni
kuvela ukuba isilwanyana sijongeka ngathi siphila, nantsi enye ihagu onokuyenza kunye nombala
Kukwakhona nesinyithi sombala omangalisayo kunye neparrot.
Apha ngezantsi ndinike istayile ezili-11 zeesayizi ezahlukeneyo nezilwanyana. Ungazikhuphela ngokuthe ngqo kule ndawo-isimahla. Kwizitampu uya kufumana imifanekiso yeekati, izinja, ixhama, intaka enye nefudu. Ukuba ubungakanani abulungelanga, ungawandisa umfanekiso kumhleli-nokuba kunjalo, umgangatho weprinti awuyonto iphambili.
Ukusukela ebuntwaneni, wayethanda ukwenza le nto, ukuphinda abhale imifanekiso eyahlukeneyo, kubandakanya izilwanyana, kwiipensile. Ngenxa yoko awunakuba nakho ukuzoba, kodwa ngepensile uza kuphumelela, ndithathe ukhetho oluncinci lweesitayile:
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,548.